Home » Property (Page 7)
A house and Land on the main road for sale
Property, Property for Sale | Khin Phone Htet | December 14, 2013
(1) A big house and 5600 sq feet land for sales. The with 70' and long 80'. Permit land with the name of first owner, my grand mother. (2) Electricity and wat...
Property, Property for Sale | lucky | December 14, 2013
(27' x 45') ဂရံမြေအမျိုးအစား၊လန(၃၉) ကျပြီး၊ အိမ်ဆောက်ရန်အသင့် ခြံခတ်ပြီး၊ ဖွံ့ဖြိုးရေးလမ်းသွယ်၊သုခဂုဏ်ရည်လမ်း၊သန်လျှင်။အရှုပ်အရှင်းကင်း။ ပိုင်ရှင်ကိုယ်တိုင...
Property, Property Agents, Property for Sale, Wanted | lovely | December 10, 2013
ဒဂုံ တက္ကသိုလ်အနီး 130 ရပ်ကွက်ရှိ 46*60 ပါမစ်မြေရောင်းရန်ရှိသည်။ အမှတ် 1077ဖြစ်ပါသည်။ မင်းရဲကျော်စွာလမ်းမကြီးနှင့်တစ်လမ်းကျော် 160သိန်းညှိနှိုင်းဈေး ဆက်သွယ်...
Mingalardong Garden City * Kantkaw Yeiktha 1 * Nice view, Infront of Golf Club * Grant land * 100' x 200 ' * 4500 lakhs * Contact : 09 731 52 327( ...
***အိမျနှငျ့ခွံရောငျးမညျ*** မွောကျဒဂုံ(39-B)ရပျကှကျ 40'×60' ၊တထပျတိုကျ(အသငျ့နေ) အုပျတံတိုငျးခတျခွံစညျးရိုးကာပွီး ဥသာဖုရားလမျး(မဟာဗန်ဓုလလမျးနှငျ့နီး)...
Property, Property Agents, Property for Sale | Aye Aye Aung | November 6, 2013
Land to be sold near Bayli Bridge! Area: 80'x60 Suitable to openarestaurant since it is now occupied byaJapanese restaurant. Price: 7700L
Newly built, A big house,3RC,4MBR, 2SB. 4000 Square feet.